10-Ka Magaalo Ee Dadka Ugu Badani U Safreen Sannadkii 2017, Magaalooyinka Shiinaha Oo Calanka U Sida, Halkeese Dubai Kaga Jirtaa? | FooreNews
Home Barnaamijo 10-Ka Magaalo Ee Dadka Ugu Badani U Safreen Sannadkii 2017, Magaalooyinka Shiinaha Oo Calanka U Sida, Halkeese Dubai Kaga Jirtaa?
FoorenewsFeb 15, 2018Barnaamijo, Sheekooyin, Suugaan0
Dunida waxa jira Magaalooyin siyaalo kala duwan loo booqdo oo maalin walba, wiig walba, bil walba iyo sannad walba qaabila tirada dadka ugu badan ee Musaafiriin ah ee daafaha dunida isaga kala yimaad, kuwaasi oo muraado kala duwan u socda haba ugu badnaadaan safarrada Ganacsiga iyo Dalxiiskuye. Qormadan oo aan ka soo qaadanay shabakadda Sky News, Wargeyska Foorena idiin soo turjumay waxa ay muujinaysaa 10-ka Magaalo ee dadkii ugu badnaa qaabilay ama soo dhaweeyey sannadkii aan ka soo gudubnay ee 2017, tirada dadka u safray iyo dalalka ay ku kala yaalaan waxaanay u kala horreeyaan sidan:
Magaalada Hong Kong ee dhulweynaha dalka Shiinaha ayaa noqotay Magaalada kaalinta koowaad gashay ee dadka ugu badani u safreen caalamka sannadkii 2017, waxaanay sidaa ku ilaashatay kaalinteeda koowaad oo ay sannadihii ugu dambeeyey ku jirtay. Waxa magaaladan hawlo Ganacsi, Dalxiis, Caafimaad iyo Muraadyo kaleba u yimid dad ka badan 26 Malyuun iyo Lix Boqol oo Kun oo Qof.
Caasimadda waddanka Thailand ee Bangkok waxa ay ku jirtaa kaalinta 2aad ee magaalooyinka ugu booqashada badnaa sannadkii 2017 waxaana magaalada Muraadyo kala duwan u yimid dad ka badan 12-Malyuun oo qof. Waana magaalo dadka soo boqdaa aad u sii kordhayaan sannad walba. Waxaanay xejisanaysaa kaalinta ay ku leedahay magaalooyinka ku yaalla qaaradda Asia ee xuurtada ku haysata booqashada ugu badan ee adduunka.
Magaalada London waxa ay wali ku jirtaa magaalooyinka waaweyn ee wali haysta aqlabiyadda dadka soo booqda. Iyada oo tartan kula jirta magaalooyinka Asia waxa ay noqotay magaalada 3aad ee dadkii ugu badnaa usoo safreen sannadkii 2017 waxaanay kaalinta koowaad kaga jirtaa magaalooyinka Yurub. Magaalada dalxiis, ganacsi, codsi deganaansho iyo arrimo badan oo kaleba waxa u yimid 2017 dad ka badan 19 Malyuun oo qof.
Caasimadda Waddanka Singapore ee Singapore waxa ay ku jirtaa magaalooyinka safarka ugu badan dadka adduunku ku tagaan sannad walba waana magaalo ganacsiyeed saxmad badan. Waxa sannadkii dhawaa safar ku yimid dad ka badan 16-Malyuun iyo Lix Boqol oo Kun oo qof.
Magaalada Macau oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Shiinaha ayaa ku jirta kaalinta shanaad ee magaalooyinka loogu safarka badan yahay adduunka wakhtigan. Magaalada oo ku taalla xeebta Koonfureed ee waddanka Shiinaha ayaa waxa sannadkii dhawaa ee 2017 soo booqday dad ka badan 15 Malyuun oo qof waxaanay noqonaysaa magaalada saddexaad ee Shiinays ah oo soo gasha 10-ka magaalo ee adduunka loogu safarka badan yahay. Waxa lagu naanaysaa Las Vegas- tii Shiinaha, marka la eego tirada dalxiisayaasha ee sannad walba soo booqata waxaanay leedahay dhul lagu raaxaysto, lagu tunto laguna ciyaaro khamaarka.
Magaalo Ganacsiyeedda waddanka yar ee Isu-tagga Imaaraadka Carabta ee Dubai waxa ay mar walba ku jirtaa magaalooyinka adduunka ee loogu booqashada badan yahay. Dalxiisayaal, ganacsato iyo dad badan oo adduunka kale isaga kala gooshaya ayaa soo mara magaaladan caanka noqotay ee carbeed. Waxa sannadkii 2017 soo booqday magaaladan dad ka badan 14-Malyuun iyo Sagaal Boqol oo kun oo qof, waa tiro wax yar ka dhiman 15 Malyuun oo qof. Cel-celis ahaan maalintii waxa soo booqda oo safar ku yimaad dad ka badan 33035 oo qof.
Caasimadda waddanka Faransiiska ee lagu naanayso Caasimaddii Iftiinka waxa ay ka mid tahay magaalooyinka adduunka ugu caansan ee sida weyn loogu soo safro. Waxa ay kaalinta 7aad kaga jirtaa magaalooyinka adduunka ee loogu safarka badan yahay halka ay kaalinta labaad kaga jirto magaalooyinka Yurub oo sida aan hore u soo aragnay waxa kaliya ka horraysa London. Waxa sannadkii dhawaa oo kali ah soo booqday in ka badan 14 Malyuun oo qof waxaana inta badan loo yimaad dalxiis iyo tamashle waxaanay caan ku tahay Taallada dheer ee Eiffel Tower.
Waa magaalo taariikhi ah oo aad loo soo booqdo dad badanina u soo safraan sannad walba. Waa magaalo ganacsiyeedda ugu weyn dalka Maraykanka. Sannadkii dhawaa ee 2017 waxa magaaladan safar ku yimid in ka badan 12-Malyuun iyo Toddoba boqol oo kun oo qof waana magaalada kali ah ee Maraykanka kaga jirta 10-ka magaalo ee loogu safarka badan yahay waxaana ku yaalla shirkadaha adduunka ugu waaweyn.
Shenzhen oo ah magaalo dalka Shiinaha ku taalla oo gaar ahaan ku dhacda Koonfur Bari dalkaasi Shiinaha ayaa noqonaysa magaalada 9aad ee adduunka loogu safarka badan yahay halka ay ka noqonayso magaalada saddexaad ee shiinaha ku taalla ee 10-kan dal ka mid noqotay. Waxa ay u dhawdahay Hongkong. Waa magaalo ganacsiyeed sidoo kalena dalxiiska loo tago oo aad u saxmad badan, kuna yaallaan dhismayaal dhaadheer iyo xarumo ganacsi oo waaweyni. Magaaladan waxa soo booqday sannadkii dhawaa dad ka badan 12-Malyuun iyo Lix Boqol oo kun oo qof waxaanay ku xigtaa magaalada New York.
10. KUALA LAMPUR
Caasimadda waddanka Malaysia ee Kuala Lampur ayaa noqonaysa magaalada 10aad ee dadka ugu badani soo booqdeen sannadkii dhawaa ee 2017. Magaalo ganacsi, dalxiis iyo muraado kaleba loo tago sidoo kalena dalal badan oo adduunka ah looga soo kala safro weeyi. Sannadkii dhawaa waxa magaalada soo booqday dad ka badan 12-Malyuun iyo saddex boqol oo kun oo qof.
Previous PostMaalin Taajir: Agaasimaha maamulka iyo Lacagta Ee Wasaarada Macdanta Somaliland- Qalinka: Muuse Jaamac Gorey Next PostMusuq Maasuq Dul Hoganaya Sanduuqa Horumarinta Somaliland Ee SDF Iyo Maalaayiin Dollar Oo Lagu Cunay Mashruuca Abuuriin Ee Wasaaradda Beeruhu Maamusho Wakhtigii Xukuumaddii Siilaanyo